အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ထူးထူးဆန်းဆန်း ပန်းရောင်ရေကန်ကြီး
14 Responses to “ထူးထူးဆန်းဆန်း ပန်းရောင်ရေကန်ကြီး”
Nice. I wanna visit there.
ရေမကူးတတ်တော. ရေပေါ်မှာ ကိုယ်ဖော.ထားသလိုခံစားချက်မျိုးကိုခံစားကြည်.ချင်ထှာ...
ဗဟုသုတတွေ ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ.. မမရေ
အလည်တော့ သွားချင်သား ... ။ သွေးရောင်တွေလို ဖြစ်နေမလားပဲနော် ... ။ အဲလို တွေးမိတော့ကျလည်း ... ရေပေါ် အိပ်ကြည့်ရမှာ ... လန့်စရာ ... :)
ရောက်ဖူးချင်လိုက်ဗျာ .... ရေပေါ်မှာ တစ်ရေးလောက် အိပ့်ချင်လို့ လေ .... အဟီး ... ။
ကျေးဇူးပါဗျာ .... အခု လို ဗဟုသုတလေးတွေ ရှာဖွေ ပေးလို့ ပါ ....
ဗဟုသုတဖြစ်စရာလေးကို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
380 g/L ဆိုတော့ အတော့်ကို များလှပါလား၊ ရေကူးရင် မျက်စိအတွက်တောင် အန္တရာယ် ရှိနိုင်မယ် ထင်တယ်နော်၊ ရှာရှာဖွေဖွေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ မချောရေ..။
မမထံအလည်လာရင်း ဆီနီဂေါလ်နိုင်ငံရဲ့ ပန်းရောင်ရေကန်ကြီးဆီကိုလည်း တစ်ခေါက်တစ်ခါ ရောက်သွားပါတယ် မမရေ ... :)
ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ပန်းရောင်ရေကန်ကြီးဆီကို မချောကျးဇူးနဲ့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ :)
ပန်းရောင်ဆိုတာ အချစ်ရဲ့သင်္ကေတတဲ့း)
အနော့ချစ်တူလေးနဲ့တွားချင်လယ်း)း)